နှမျောမိတယ် – Grab Love Story
by phyu May 1, 2021
ပျိုမေ အမျိုးသမီး ဘော်ဒါဆောင် အဆောင်မှူးကတော့ ခွာညိုထွန်း အရပ်က ပုံမ န် ခါးက နဲနဲလေး တုတ်တယ် ဖင်ကကြီးတယ် ရင်က မောက်တယ် မျက်နာလေးဖြူဖြူချောချောလေး မိန်းခလေး ဘော်ဒါဆောင်မှာ အဆောင်မှူးး ခလေးအမေပဲ ဒါပေမဲ့ ခလေးတို့အမေ အပျိုတွေဆိုသလို အပျို လုပ်ချင်တော့ ခလေးအနားမရှိရင် အပျိုလုပ်ချင်ကြတယ် အဆောင်က မိန်းခလေးအဆောင်ဆိုပေမဲ့ ကျောင်းသူ မိဘများလာရင်တော့ တညတလေတော့ထားရတယ် တခါတလေ ကျောင်းသူအကိုတွေလာရင်တော့ ခွါညို ရှိုးလိုက်တယ် လန်းရင်တော့ ဒီမှာအိပ်ခိုင်းတယ် ဒါပေမဲ့ အကိုတွေကလည်း ရှိုးကြတာပဲ ခွါညိုဖင်ကိုကြည့်ကြတာပဲ တနေ့ကျောင်းသူလေး ယွန်းမီမီအကို က ယွန်းမီအတွက် ပိုက်ဆံ လာပို့်တော့ကောင်လေးက အလန်းဆိုတော့ အဆောင်လခပေးချင်တော့ခွာညိုရဲ့ ရုံးခန်းကိုဝင်လိုက်တော့ မောင်လေး လာ ကော်ဖီသောက်အုံးလေ သောက်ပါ အမ အားမနာပါနဲ့ မောင်လေးရဲ့ ဒါနဲ့ကောင်လေးလည်း အားနာနာနဲ့ ကော်ဖီသောက်လိုက်တော့တယ် ကော်ဖီထဲမှာ အမျိုးသားသုံး ဟော်မုန်းအားဆေးထည့်ဖျော်တာ မသိလိုက်ဘူးလေ ခနနေတော့ ကောင်လေးစိတ်တွေတမျိုးဖြစ်နေတယ် အော်ကောင်လေးနမ်မည်က အောင်နိုင်ဝင်းပေါ့။
နောက်တော့ ခွာညိုက စကားပြောရင်းနဲ့ကောင်လေးအနားကပ်ထိုင်ပါလေရော ကောင်လေးကလည်း ရှက်သလိုလို ဖြစ်ပေမဲ့ နောက်တော့ ခွာညိုလက်ကို ကိုင်လိုက်တယ် အမလေး ရဲလိုက်ထာ ဘာလိုလည်း မမ ကလည်း မမက အရမ်းလှတာကို ကျနော်လည် မထိန်းနိုင်တော့ဘူးလေ ဒီတော့ ဟော့ဒီလိုဖက်ထားလိုက်ပီဗျာ ဟင့် လွှတ်ကွာ အသက်ရှူကြတ်တယ် မလွှတ်ချင်ဘူး အမြဲဖက်ထားချင်တာ နောက်တော့ကျမကပဲ သူ့ကို ကျမ အခန်းထဲ ခေါ်သွားမိတယ် အိပ်ယာထဲရောက်တော့ ကျမ ကိုဖက်ပြီး ကျမနှုတ်ခမ်းကို စုပ်လိုက်တယ် လူငယ်ဆိုတော့ အရမ်းစုပ်ထာပဲ လက်ကလည်း ကျမနို့ကို ဖြစ်ညစ်လိုက်ခါ အစိကျိတ်တောင် ကျေလောက်တယ် နောက်တော့ အဝတ်စားချွတ်လိုက်ပီး ဘော်လီဂျိတ် ကိုဖြုတ်လိုက်တယ် ပေါ်လာတဲ့ နို့ကို နယိပီး နို့သီးလေးကို စို့ခံရတော့ သူ့ခေါင်းကိုဖိပြီး ရင်ကော့ပေးလိုက်မိတယ် နို့သီးလေးက ကျင်ခနဲဖြစ်သွားတယ် နောက်တော့ ကျမ ရဲ့. ထဘီကို ချွတ်ပြီး ပင်တီဘောင်းဘီကိုပါချွတ်ချလိုက်တော့ ကျမ စောက်ပတ်ကို တချက်ကြည့်ပြီး ပေါင်းကြားမှာနေယာယူလိုက်တယ် သူ့လီးကိုတံတွေးစွတ်ပြီး ကျမ အဖုတ်ကိုတေ့ပြီး သွင်းချပါလေရော ဗြီ ဘွတ် ဒုတ် အမလေး သေပါပီ တော့ နာလိုက်တာ ဘာလို့လည်း မမ လီးက အကြီးကြီး တစ်ချက်ထဲနဲ အဆုံးထိ ဆောင့်ချလိုက်တော့ နာတာပေါ့ ဒါဆိုလည်း ဖြေးဖြေးဆောင့်မယ်နော် အင်းပါ နောက်တော့မှ မောင်လေးသဘောပါ ခုတော့ဖြေးဖြေး အင်းပါ ကျမကို ဖြေးဖြေးပြန်ဆောင့်ရင်း သူလက်ကြီးနို့ကို နယ်တယ် နောက်နှုတ်ခမ်းစုပ်ရင်းနဲ့သူက ဖီးလ်အရမ်းတက်လာတယ်ထင်တယ်။
အ အား မမ ကျနော်မြန်တော့မယ် အားအားအားးးးး ကျမလည်း ကောင်းလာတော့ သူကအရမ်းဆောင့်ချလာတော့ ကျမလည်းသူ့ကို ဖက်ထားရင်းနဲ့ကျမအဖုတ်ထဲ အရည်တွေဖြန်းခနဲ ပန်းချတယ် ငယ်တဲ့သူဆိုတော့ အရည်တွေများလိုက်ထာ ကျမ မှာတော့ မပြီးသေးဘူးရှင့် ကျမနမ်မည် က ယွန်းမီမီကျော် ပါ အိမ်က ပိုက်ဆံပို့တော့ ထွက်ယူရင်းအိမ်က မှားတဲ့စကားနားထောင် အဆောင်လခ ကို အဆောင်မှူးးစီပိုက်ဆံသွားပေးလို့စောင့်နေတာ တော်တော်နဲ့မလာနိုင်တာနဲ့ သွားကြည့်ရာ အခန်းနားရောက်တော့ အသံကြားတာနဲ့ နားထောင်ကြည့်တော့ အားးး အရမ်းမဆောင့်နဲ့အုံးဖြေးဖြေး နောက်တော့ မောင်လေးသဘော ဟင် ဒါဆို ကိုကို နဲ့ အဆောင်မမတို့ဖြစ်နေကြတာပဲလား ကျမလည်းဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူးဖြစ်နေတာ သူတို့ကတာ လုပ်နေကြတာ ကျမနားလည်းထောင်ချင်တယ် အပြငိက တယောက်ယောက်မြင်သွားမှာလည်း ကျမအောက်က ဖုတ်ဖုတ်ကလည်း ယားကျိကျိနဲ့အရည်တွေ စိမ့်နေတယ်ရှင် တယောက်ယောက်အပြင်က လာရင် မြင်မှာစိုးတာနဲ့ ပြန်လှည့်လာလိုက် ဒီနေ့ အခန်းထဲမှာ အခန်းနေသူငယ်ချင်း သဲနုက နယ်ပြန်သွားတော့ ကျမတယောက်ထဲပေါ့ လက်ကအောက်ဆင်းပြီး ကျမရဲ့ ပိပိကိုသွားပွတ်မိတယ် ဖျင်းကနဲ ကောင်းလိုက်ထာရှင်လက်ကလည်း သွားနှိုက်မိတော့ အထဲကို သွင်းကြည့်မိတယ် အဲဒိတော့မှ ပိုကောင်းပါ့လားနောက်တော့ ကျမလည်းကောင်းလာတော့ရှေ့ထိုးကြည့်တယ် အားးး နာတယ် ဒါပေမဲ့ ကောင်းလည်းကောင်းတော့ မနားချင်တာနဲ့ကျမစောက်ပတ်ထဲက အရည်တွေထွက်ပီး ပန်းချမိတယ်ရှင်။
နောက်နေ့မနက်ရောက်တော့ အကိုက နယ်ပြန်သွားတယ် ကျမလည်း မနေ့က အဆောင်လခကို အကိုလာပေးလားမေးမိတယ်ကျမကိုလည်း ဘာစားမလည်းတွေပြောတယ် သဘောကောင်းနေတယ် အကို မျက်နာနဲ့ပေါ့ ကျမလည်းအလိုက်ထိုက်နဲ့ပေါ့ ညဘက်ရောက်တော့ အဆောင်တံခါးပိတ်မယ် မိန်းခလေးတွေ အခန်းထဲဝင်မယ် ပေါ့ ဧည့်သည်တယောက်ရောက်လာတယ် အသက်က ခပ်ကြီးကြီး သဲနုအဖေပေါ့ သူသမီးနေမကောင်းလို့အဆောင်မလာနိုင်သေးကြောင်းပြောတယ် သူက ဒီမှာခန တည်းမယ်ပေါ့ အဆောင်မှူးကလည်း ခက်နေတယ်ပေါ့ ကျမ အဆောင်ပိတ်မှ ဧည့်သည်လာတယ်ဆိုတော့ အမှန်က အဆောင်ကို ဧည်သည် ညအိပ်မသိတ်ပါ မနေ့က ယွန်းမီမီအကိုနဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လူငယ်ဆိုတော့ မြန်ပေမဲ့ ကျမဘက်က မပြီးခဲ့ဘူးခုလည်း သဲနုအဖေက လူကြီးဆိုပေမဲ့ သန့်သန့်လေး နဲ့ ခန့်တယ် နောက်ဆုံတော့ ကျမလက်ခံလိုက်တယ် ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလအပေါ်ထပ်မှာ သိတ်လိုက်တယ်ရှင် ကျမလည်း အပေါ်ထပ်နားနေခန်းမှာပဲ အိပ်တယ်။ ည၁ဝနာရီကျော်တော့ ငြီးသံကြားတာနဲ့ တခါးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ သဲနုအဖေအခန်းကဖြစ်နေတယ် သူ့နမ်မည်က ဦးသိန်းမောင်တဲ့ရှင်ကျမလည်းအခန်းတခါးခေါက်လိုက်တယ် ဒေါက် ဒေါက်ဒေါက် ဖျားနေတယ် ကိုယ်တွေကလည်း ပူခြစ်နေတယ် သူ့နဖူးကို စမ်းကြည့်တယ်တကယ် ဦးလေး ဖျားနေတယ် ဟင်းး အင်းးချမ်းတယ် တူမကြီး ကျမလည်းဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူးဖြစ်နေတယ် ဦးသိန်းမောင်ကျမကို ဆွဲပြီးဖက်ပါလေရော ကျမလည်း ရုန်းပေမဲ့အားကမမျှတော့ သူလည်းကျမ နို့ကိုနယ်တယ် ကျမ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်တယ်ကျမလည်း အောင်နိုင်ဝင်းနဲ့ မပြီးထားတော့ စိတ်ကပြန်ထလာတယ်။
ဦိးသိန်းမောင်က အသက်ကြီးပေမဲ့ တောင့်တင်းတယ် ကျမကို အပေါ်ကဖိထားပေမဲ့ တကယ်တော့ဖျားချင်င်ယောင်ဆောင်နေတာ ကျမဘေးတဖက်တချက်လက်ထောက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ပြီး နောက်တော့လက်က အင်ကျီ ဘယာစီယာကို ပင့်တင်ပြီး နို့ကို စို့တယ်ရှင် ပြွတ် ပြွတ် ပလပ် ပလပ် ဖြေးဖြေး ယားတယ် ပြောလည်းမရပါဘူး စို့စရာရှိတာ ဆက်စို့တယ် နောက်သူ့ဒူးခေါင်းကျမရဲ့ပေါင်ကြားကို ခွဲပြီးပုဆိုးကို ခေါင်းပေါ်က ချွတ်လိုက်ပြီး နောက်သူ့လီးနဲ့ ကျမ စောက်ပတ်ကို ပွတ်တယ် တဖြေးဖြေးနဲ့ အရှိန်တက်လာတော့ ကျမစောက်ပတ်က အရည်တွေကလည်း ထွက်နေတယ် နောက်တော့သူ့လီးကြီး နဲ့ကျမစောက်ပတ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်တယ် ဗြစ် ဗြစ် ဗြစ် ဖွတ် ရှူးအားးးနာတယ် နာတယ် အမလေး အင့် ရော့ ဘွတ် ဘွတ် မရဘူး ပြန်ထုပ်အုံး ဘာလို့တုန်း တူမကြီး ရဲ့ ကြီးလို့ ဘာကြီးလို့လည်း ကွာ ရှင့်လီးက ကြီးတာ ခနတော့ ရပ်ပေးတယ် ဖြေးဖြေးလေးနဲ့ ညောင့်ပေးနေတာ အလုံးထည်က လူကြီးသလောက်လီးကြီးတယ် နောက်တော့ သူလည်းအရှိန်တင်လိုက်ပြီး တဖန်းဖန်းနဲ့ဆောင့်ချပါလေရော ကျမလည်း သူ့ကျောပြင်ဖက်ထားပြီးကော့ပေးလိုက် ကျမက အရင်ပြီးသွားတယ် နောက်အချက်၃ဝလောက်ဆောင်ပြီးမှ ကျမ အဖုတ်ထဲ အရည်တွေ ပန်းချလိုက်တယ် အရည်ကလည်းများလိုက်ထာ ပြီးတော့ ကျမဘေးဘက်လှဲချလိုက်ပြီး နားနေတယ်လက်ကတော့ ကျမကို ဖက်ထားတယ် ကျမလည်း သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာမှေးနေတာပေါ့ ကိုယ်တွေက အေးနေတယ် ခုနတုန်းက ကိုယ်ပူနေတာ ခုဘယ်လိုဖြစ်ထာလည်း။
ဒီမယ်လေ တူမကြီးရဲ့ အိပ်ယာထဲက ကြက်သွန်ဥ ကောက်ပြတယ်လေ ကျမလည်း ခုမှ သတိထားမိတယ် ဟွန့် ဉာဏ်ကြီးပဲ ဒီက တကယ်ဖျားတယ်ထင်လို့ အနားတိုးပြီး ကျမကို ဖက်လိုက်တော့ သူ့လီးကြီးက ကျမ ပေါင်ကို ထိုးမိတယ် တော့ ဟင် ဦးဟာကြီးက ထလာပြန်ပြီ အဲဒါ တူမကြီးကို ချစ်ချင်သေးလို့ ဟင်တော်ပြီလေ တော်ဘူး တော်ဘူး ဒီည မိုးအလင်းအစွမ်းပြမယ် ရှင် အဲဒီညက တကယ်ပဲရှင် မနက်ထိကို လိုးလိုက်ထာ သူများတွေ မထခင် ကိုယ်ကဦးအောင်ထပြီး ကိုယ့်အခန်းသွားရတယ် နောက်ပြန်အိပ်တယ် ခြံစောင့် ကိုအေးသိန်းက သူပြန်တော့မယ် ဆိုတာ လာပြောလို့ကျမလည်းထပြီး မျက်နာသစ် အလှပြင် ကျောင်းသူတွေက ကျောင်းတက်ကြပြီးဆရာမတွေကလည်းကျောင်းသွားဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ် ဆရာမတွေကတော့နည်းပါတယ် ဆရာမ ယောက်ျားလာရင်တော့ အခက်ခဲ ဖြစ်ပါတယ် စုံတွဲတွေကိုအပြငိမှာအိပ်ဖို့ပဲ ပြောလိုက်ပါတယ် တခါတလေကျမနေမကောင်းရင်တော့ အိမ်က ကျမ ဖေဖေကိုပဲ အဆောင်ထားရတယ်တနေ့ကျမ နေမကောင်းဖြစ်တော့ ကျမဖေဖေ ကို လှမ်းခေါ်လိုက်ပြီး ဖေဖေ အေးသမီး သမီး နေမကောင်းလို့ အဆောင်လာပေးပါအုံး အေးအေးလာခဲ့မယ် ကျမ ယွန်းမီမီ အဆောင်မှူးးမမနဲ့ အကိုနဲ့ဖြစ်ပြီးကထဲက ချောင်းနေတာ တနေ့မမျှော်လင့်ပဲ သဲနုအဖေ အဆောင်လာပြီး သူ့သမီးဖျားလို့မလာသေးကြောင်းပြောနေတာအဖိုးကြီးက အဆောင်မှူးကို ကြည့်နေတာ မျက်လုံးကကျွတ်ကျမတပ်ကြည့်နေတာ အဲဒါနဲ့ ည ၁ဝနာရီရောက်တော့ သဲနုအဖေက မီဖိုချောင်ဖက်အခန်းမှာ ကြက်သွန်ဥယူလာပြီး သူအခန်းဖက်သွားပါတယ် ညရောက်တော့ ငြီးသံကြားပါတယ် ကျမလည်း ဘာများလည်းမပေါ့။
အဆောင်မှူးက အပေါ်အိပ်နေတော့ သတိထားနေတာ ဂျလောက် လို့ ဂလန့်ဖွင့်သံကြားအနီး အခန်းကွယ်နားကို ပုန်းနေလိုက်တယ် အဆောင်မှူးက. ထွက်လာပြီး သဲနုအဖေအခန်းဘက်ဝင်သွားတယ် ကျမလည်း အခန်းတံခါးကနေ ချောင်းကြည့်ရာ အဖျားက ငြီးသလိုလိုနဲ့ အဆောငိမှူးကိုဖက်ထားပါလေရော အိပ်ယာပေါ်ကြက်သွန်ဥ ကျနေတာ ၂ယောက်စလုံး သတိမထားမိကြဘူး နောက်တော့ အဆောငိမှုး မမကို ဦးလေးကြီးက အင်ကျီပေါ်က နို့ကို ဖြစ်ညစ်နေတာ နောက်နှုတ်ခမ်းကို စုပ်တယ်လက်ကြီးက အောက်ကနေလျိုပြီးတဖက်က ဂျိတ်ကို ဖြုတ်တယ် တဖက်ကလျော့သွားတဲ့ဘယာစီယာကို အပေါ်မတင်ပြီး နို့ကြီးတွေကို နယ်တယ်နောက်တော့ နို့စို့တယ် ကျမလည်း ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ့်နို့ကို နယ်လိုက်တယ် ကောင်းလိုက်ထာရှင် တခြားသူတဦးတယောက်ကများလာနယ်ပေးရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိတယ် ဒါနဲ့ဆက်ချောင်းမိတော့ သဲနုအဖေက မမပေါင်ကြားမှာနေရာယူပြီး သွင်းချလိုက်တယ်ဘ ဗြစ် ဗြစ် အားးးနာတယ် နာတယ် ဖြေးဖြေး လိုးပါရှင် ရှင့်လီးက အကြီးကြီး ဦးလေးကြီးကလည်း လိုးတာတော့အဆက်မပြတ်ဘူးကြည့်နေရင်းနဲ့ ကျမလည်း လက်က အောက်ကို ဆင်းပြီး ကျမအဖုတ်ကို နှိုက်မိတယ် အဖုတ်ထဲက အရည်တွေကလည်း စိမ့်နေတာ ကြည့်လိုကလည်းကောင်းနေတော့ ဘေးကို သတိမထားမိတော့ဘူး နောက်တော့ဘကျမပခုန်းကို နောက်ကနေဆုပ်ကိုင်မိတော့ ဟင် အဆောင်ရဲ့ အစောင့် ဦးအေးသိန်းသူလည်းကျမအပေါ်ကနေချောင်းကြည့်ပြီး အထဲမှာ အဆောင်မမ နဲ့ ဖြစ်နေတာသိတော့ သူ့အချောင်းကြီးက နောက်ကနေထောကိနေတော့ ကျမလည်း ရှောင်ထွက်မယ်ကျန်တော့ အထွက်မခံဘူးရှင်။
ကျမလည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့ နောက်သူ့လက်ကြီးက ကျမ နိုအုံကိုကိုင်တယ် နောက်တော့ သူက ကျမကို ပွေ့ချည်ပြီး သူ့အခန်းထဲခေါ်သွားတယ် အခန်းထဲက ခုတင်ပေါ်မှာ တင်ပြီးချလိုက်ထာနဲ့ ကျမ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ယူလိုက်တယ်ရှင် ပြွတ် ပြွတ် ကျမ လည်းမမတို့ဖြစ်ခဲ့တာကို ကြည့်ပြီး ဖီးလ်တက်နေတော့ မငြင်းချင်တော့ဘူး ရှေ့ကအင်ကျီကြယ်သီးတွေဖြုတ်ပြီး နောက်က ဘောလီဂျိတ်ကို ဖြုတ်ချတယ် ဘော်လီချောင်သွားတာနဲ့ အတွင်းထဲကပေါ်လာတဲ့ဖြူဖြူလုံးလုံးနို့ကို ညစ်ချလိုက်တယ် ရှင် အားးးး နာတယ် နာတယ် နောကိတော့ ကျမ နို့ကို စို့တော့တာပဲ ခုမှပြန်ငယ်လို့လား မသိဘူး အရမ်းစို့တာပဲရှင် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ဖြေးဖြေး ယားတယ် ရှင် ပြောလိုလည်းမရဘူး နို့ကို ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်စို့နေတာ နယ်လည်းနယ်တယ်နောက်တော့ သူ့နှုတ်ခမ်းက အောက်ဆင်းပြီးလျှာနဲ့ယက်နောက်တော့ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းထိကို ယက်လိုက်တယ် ကျမလည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူး အဖုတ်ထဲက အရည်တွေကလည်း ထွက်လိုက်အရမ်းပဲ နောက်တော့ ဦးအေးသိန်းက ကျမ ပေါင်ကြား ဒူးထောက်ဝင်ပြီး ပုဆိုးကို ခေါင်းပေါ်က ချွတ်လိုက်ပြီး သူ့လီးကြီးနဲ့ ကျမ အဖုတ်နှုတ်ခမ်း ကို တေ့ပြီး သွင်းချလိုက်တယ် ဗြစ် ဗြိ ဗြိ ပြစ်တစ် တစ် ဗြွတ် အားးး နာတယ် နာတယ် မရဘူးထင်တယ် ဦးလေးဟာက အကြီးကြီးပဲ သမီးဟာက သေးသေးလေး အရမ်းကြတ်တာပဲ ဟာ ဘာတွေပြောနေတာလည်း ရော့ အင့် ဘွတ် ဗြိ အားး နာပါတယ် စို ထိုးထည့်ပြန်ပြိ ဗြိ အားးးအရမ်းမဆောင့်နဲ့အုံးဖြေးဖြေး သမီး တဝက်ကျော်နေပါပြိ ခနလေးပါ ရော့ အင့် အားးး အမလေး ကွဲပြီ ကျမစောက်ပတ် ကွဲပြီထင်တယ် ဦးအေးသိန်းကြီးက ကျမ အော်တဲ့စကားကြောင့် အောက်ကို ငုံ့ကြည့်တယ် ဘာလို့ကြည့်တာလည်း ရှက်ပါတယ်စိုမှ သမီးပဲ ကွဲသွားပြီစိုလို့ကြည့်လိုက်ထာ ဟွန့် မသိဘူးများ မှတ်နေလား သူများဟာကို အရသာခံပြီးကြည့်နေတာမျာ။
သူလည်း ပြောလည်းပြောဆောင့်လည်းဆောင့်ရင်း အချက်၃ဝလောက်ရှိတော့ အရည်ကလည်တောက်လျောက်ထွက်နေတော့ အရင်လိုမကြတ်ပဲ အဝင်ချောလာတယ် ခံစားမှုကလည်းကောင်းလာတော့ ဦးအေးသိန်း ကျော ကို ဖက်ထားမိတယ်မျက်နာခြင်း ဆိုင်အလိုးခံရတော့ ရှက်သလိုလိုကြီးနောက်အချက်၅ဝလောက်ရှိတော့ ကျမအဖုတ်က ကျင်တက်လာပြီး သူ့လီးကြီးကိုဆွဲညှုပ်လိုက်ပြီးအရေတွေ ပန်းချမိတယ် နောက်တော့ သူ့လီးကြီးကလည်း ကျမ စောက်ပတ်ထဲအရေတွ ပန်းချလိုက်တယ် အဲဒီညက ဦးအေးသိန်းက နောက်ထပ် ၂ခါထပ်လုပ်သေးတယ် ကျမ အဖုတ်က သွေးစတွေကော အရညိတွေကော ထွက်လာမိတယ် ကျမရဲ့အပျိုစင် လေးကို အဆောင်ရဲ့ အစောင့်နဲ့ဖြစ်မိလိုတော့ နှမျောမိတယ် ဒါပေမဲ့ ကျမရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်စီးပေးလို့ ကျေးဇူးပဲ တင်ရမလိုပါပဲရှင်…..ပြီးပါပြီ။